नेदरल्याण्डले आफ्नो राजधानीमा किन लगायो डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध ? , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेदरल्याण्डले आफ्नो राजधानीमा किन लगायो डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध ?
डिसी नेपाल , २३ बैशाख २०७६
एजेन्सी। नेदरल्याण्डले राजधानी एम्सटर्डममा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैछ । यहाँ अहिल्यैबाट यस्ता गाडीको प्रयोग घटाउन सुरु गरेर २०३० सम्ममा यस्ता गाडीमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । वातावरण संरक्षणको लागि संसारभर चर्चित यो देशले वातावरण प्रदूषण कम गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो । यहाँ प्रदूषण कम गर्नको लागि साइकलको अत्याधिक प्रयोग गरिन्छ । यहाँ मानिसको जनसंख्याभन्दा भेरै साइकलको संख्या छ ।
काउन्सिलर शेरोन डिक्समाका अनुसार प्रदूषण सुषुप्त हत्यारा हो । राजधानीमा प्रदूषणको स्तर बढिरहेको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरुले यहाँका नागरिकको औसत आयु वर्ष कम भएको बताएका छन् । त्यसैले अब यहाँ पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदैछ ।
अर्को वर्षदेखि यहाँ १५ वर्षभन्दा पुराना डिजेल कारमाथि प्रतिबन्ध लाग्नेछ । २०२२ सम्म धेरै धुवाँ छोड्ने सार्वजनिक बसहरुलाई पनि शहर प्रवेश गर्नुभन्दा पहिल्यै रोकिनेछ । २०२५ सम्म यहाँ दुईपाङ्ग्रे इन्जिनबाट चल्ने सवारी पूरै प्रतिबन्धित हुनेछन् र २०३० सम्ममा डिजेल र पेट्रोेलबाट चल्ने सबै सवारी प्रतिबन्धित हुनेछन् ।